Echekwara ọtụtụ ngosi-etiri music faịlụ gị Mac? Zụrụ multiple songs na iTunes na chọrọ igwu ha na gị na Android ngwaọrụ? Otú ọ dị, n'adịghị ka Windows PC, Mac adịghị ka ị efego Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba dị ka ihe mpụga ike mbanye site na iji eriri USB. Nke a na-eme ka o sie ike nyefee music si Mac ka Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. -Ewute? Jiri ya nwayọọ. A abụọ bara uru Mac ka Android music transfer ngwaọrụ nke ị nwere ike mfe idetuo music si Mac ka Android ngwaọrụ.
Method 1. Copy Ndetuta egwu ọkpụkpọ & Music si Mac ka Android na 1 Pịa
Method 2. Nyefee Music si MacBook ka Android Kpamkpam
Wondershare TunesGo maka Mac bụ a Mac ka Android Nyefee ngwá ọrụ. Ọ na-enyere gị aka ịdọrọ na dobe gị chọrọ music faịlụ site na Mac ka Android. Ọ bụrụ na ị nwere tọn songs, listi ọkpụkpọ na iTunes, ị pụrụ iji ya ka mmekọrịta iTunes music ka Android na 1 Pịa.
1. Mfe iji, nnọọ adaba
2. Nyefee songs na listi ọkpụkpọ site na iTunes na Mac ka Android ngwaọrụ
3. Akwado Android 2.1 na elu.
4. Dakọtara na ihe karịrị 2,000 gam akporo ngwaọrụ, incluidng HTC, Samsung, LG, Sony, Motorola, Huawei, ZTE, na ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 1. Run Wondershare TunesGo maka Android (Mac) on Mac.
Nzọụkwụ 2. Iji eriri USB jikọọ gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ka Mac. Mgbe detcted, gị gam akporo ngwaọrụ a ga-emere ke akpan window.
Nzọụkwụ 3. On gị Mac, chọta songs ma ọ bụ listi ọkpụkpọ ị chọrọ. Mgbe ahụ, ịdọrọ na dobe ha gị Android. I nwere ike ime ka screenshots-egosi gị.
Nzọụkwụ 4. I nwekwara ike nyefee music na listi ọkpụkpọ site na iTunes ka Android. Dị nnọọ pịa mmekọrịta tab> Akọrọ mmekọrịta iTunes ka Android. Ị nwere ike ma mmekọrịta Niile n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ họrọ listi ọkpụkpọ.
Android File Nyefee bụ a free omume, nke awade mfe ohere ka Android SD kaadị nchekwa na Mac. Na ya, i nwere ike nyefee niile gị chọrọ music faịlụ site na Mac kọmputa gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba for free.
1. The interface bụghị kensinammuo.
2. Adịghị akwado importing iTunes Listigwuọ.
3. Nanị na-akwado Android ngwaọrụ-agba ọsọ Android 3.0.
N'okpuru ebe a bụ ndị nkuzi na-ebufe music si Mac ka Android:
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Android File Nyefee na gị Mac.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ka Mac na iji eriri USB;
Nzọụkwụ 3. ẹkedori Android File Nyefee na gị Android SD kaadị nchekwa na-egosi;
Nzọụkwụ 4. Go ka Finder na gị Mac ịchọta gị chọrọ songs na ikpuru na dobe ha ka ha na music nchekwa gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
A Best Android File Nyefee maka Ị
> Resource> Nyefee> 2 ụzọ nyefee Music si Mac ka Android